Beerta Nabadda ee Muqdisho | HimiloNetwork
Beerta Nabadda ee Muqdisho
Posted by: Zakariya in Wararka December 31, 2015	0 438 Views
Muqdisho (Himilonews) – Markii ugu horreysay kadib 20-iyo dhowr sano, daganayaasha caasimadda Muqdisho waxay heleen beer ay ku nastaan taas oo soo jiidata indhaha boqollaal qoysas ah toddobaad kasta.
Kororka dagaallada iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ma ahan nolosha qura ee lagu nool yahay. Waxaa jirta doc kale oo aysan war-fidiyeennada adduunka Soomaaliya ka tebin – Kusoo dhowow Beerta Nabadda ee degmada Xamar-jabab.
Hal-majeersiga aragti ee dhallaanka ku dhex-cararaya iyo eegmada dabacsan ee waalidkoodu ku ramashoodaan – waxay uga dhigan tahay riyo guntii run ku dhaaya-furatay.
Boqollaal ayaa halkan yimaada toddobaad kasta. Mana ahan oo kaliya dadka caasimadda. Qurba-joogtu waa markooda – iyaga oo uga yimaada sida fog ee ugu dheer ee Australia.
“Jaallayaashayda Qurba-joogta, kusoo dhawaada Muqdisho. Way qurux badan tahay. Tanina waa farriin ku socta dunida oo dhan,” ayay tiri Basra Mohamed.
“Waxaan rabnaa inaan badalno aragtida laga heysto Muqdisho,” ayay sii raacisay Najma Mohamed.
Wax ka badan 20-sano, dhallaanka Muqdisho ma helin meelo ay ku damaashaadaan. Tanina waxay dad badan uga dhigan tahay calaamad muujinaysa sida Soomaaliya ay uga soo kabsaneyso mushkiladaha hareeray.
“Beerta Nabadda waxay badashay muuqaalka Muqdisho. Magaaladuna waxay noqotay qurux,” ayuu yiri Abdiwahab Hassan, oo ah dagane Muqdisho.
Ku dhex-galka beerta sawirro waa hal-majeersiga ugu badan ee dhalintu halkan u timaado. Taasina kaliya uma ahan waqti reyreyn. Waxaa kale oo ay uga dhigan tahay gudbinta sawir qurux badan oo loo diro indhaha caalamka. Mukhtar Ahmed waa mid kamid ah sawir-qaadayaasha halkan yimaada toddobaad kasta.
“Waxaan halkan ka qaadaa sawirro aan dunida ugu sheegayo inay iska tiraan sawiradda naxdinta leh ee lagu yabaalay qalbigooda. Taas badalkeedana ay ku nastaan muuqaallada cagaaran ee muujinaya quruxda magaalada Muqdisho,” ayuu yiri Muktar.
Kororka nabadeed ee ay Soomaaliya kusoo laabanayso, Muktar iyo saaxiibadiisa sawir-qaadatada waxay awoodaan inay duni u sheegaan in Muqdisho kasoo bidhaamayso muuqaalkii malluugnaa oo ay usoo birbirayso magaalo lagu marriimay midabyo-nabadeed.
Previous: Iiran oo diiday eedeymo ku saabsan Shiiceyn ay Soomaaliya kawado
Next: Latin badan oo Islaamka qaadanaya
Laacibka Kubadda Kolayga oo qaatay Diinta Islaamka.